Chandelier ọla edo - Size: cm. 65 x 65 x 100h - (DFL) - Dafne Italian Design
Home shop ọkụ Chandeliers Nwere ntụ ọka ọla chandelier - akụkụ ...
Home / shop / ọkụ / Chandeliers / Ahịhịa ifuru chandelier - Akụkụ: cm. 65 x 65 x 100h - (DFL)
Ifuru ọla chandelier - Size: cm. 65 x 65 x 100h - (DFL) buru ibu
okporoko: 806881882588 Category: Chandeliers Product ID: 20776
Brass Chandelier na okooko osisi - Akụkụ: cm. 65 65 x x 100h - dakọtara bọlbụ klas; A, A +, A ++ - ụdị njide E14 - Max wattage 40 - 3 Number nke Ìhè - Type bọlbụ HSGSC / G - Class m - IP 20 - Nche: ebu ike agbanyụrịrị. All arụmọrụ ga-rụrụ site na a pụrụ iche na ẹkesikpede - Mgbanwe ma ọ bụ tampering nwere ike ime ka ngwaọrụ ize ndụ. The ụlọ ọrụ na-anabata ibu ọrụ ọ bụla maka mmebi kpatara ya onwe ngwaahịa ruo eruo bụghị dị na ntụziaka. (DFL)
ọcha, aja aja
okpokoro oriọna na kristal - Dita 30 cm. - Style: Omuma - Kwadoro na klas nkpuchi; A, A +, A ++ - (DFL)
154€ Aggiungi al carrello
Chandelier na kristal kristal - (UL)
551€ Aggiungi al carrello
atọ ọkụ chandelier - agba ọcha - dakọtara na bọmbụ klas ike; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Chandelier mma na ọla kọpa epupụta - cm. 40 x 40 x 110h - (DFL)
Chandelier maka ụmụaka 'ime - okpokoro chandelier - Kwesịrị ekwesị maka ime ụlọ oge - Isi: 36 H 100 36 - [usoro: Dafne-White] - (DF11)
Chandelier maka ime ụlọ maka nwa ma ọ bụ nwa - A chandelier nke nwere ọkụ atọ - Lampshade na plastik dị ka ụgbụ na bọl bọọlụ atọ - Mmezi Chandelier: 40 cm H 60 cm 40 cm - [Series: Dafne-Calcio] - (DF11 )
4 cha cha cha cha cha cha cha cha ọkụ - dị mma maka tebụl buru ibu ma ọ bụ ihe na-agba agba - dakọtara na bọlbụ ọkụ klaasị; A, A +, A ++ - (DFL)
Okpokoro ụlọ maka akwa ụmụaka ma ọ bụ ụlọ ụmụ nwoke - Ezigbo ndò cone - Agba ọcha na oroma - Ọ na-ejikọta ime ụlọ na ebe obibi dị mma - Dimensions cm: 36 H 100, 36 - [usoro: Daphne-Dynamic] - (DF11)
chandelier Suspension na-enweghị bulbs cm. 45 x 45 x 125h - dakọtara na bọmbụ ọkụ nkenke; A, A +, A ++ - ihe: iron - (STL)
Akwụsịtụ chandelier Chrome Copper - (DFL)